20T ကိုယ်ပိုင် Align လုပ်ခြင်း Rotate - တရုတ် Wuxi အောင်မြင်မှု Machinery
ကိုယ်ပိုင် Align လုပ်ခြင်း Rotate
Rotate welding တက် fit
3 ဝင်ရိုးဟိုက်ဒရောလစ် posiitoner
ဦးခေါင်း & အမြီးစတော့ရှယ်ယာနေရာချ
ဟိုက်ဒရောလစ်နေရာဝင်ရိုး 3000kg 3
10T Horizontal turntable
Rotate welding တက်ကွက်တိ 100T
60T သမားရိုးကျဂဟေ Rotate
20T ကိုယ်ပိုင် Align လုပ်ခြင်း Rotate
ဝန်စွမ်းရည် - Set: 20 တန်ချိန်အများဆုံး
ဝန်စွမ်းရည် - Drive ကို: 10 တန်ချိန်အများဆုံး
ဝန်စွမ်းရည် - Idler: 10 တန်ချိန်အများဆုံး
လည်ပတ်စွမ်းရည်: 20 တန်ချိန်အများဆုံး
ရေယာဉ်များအချင်း: Min.500mm ~ မက်စ်။ 3500mm
လည်ပတ်မြန်နှုန်း: 100 ~ 1000mm / မိနစ် VFD
လည်ပတ်ပါဝါ: ပန်ကာအအေးနှင့်အတူ 1.5 KW
roller ဘီး: PU (Polyurethane ဘီး)
control system: Remote လက်ထိန်းချုပ်မှု & Foot နင်း
ဗို့: 110V ~ 575V အားလုံးရရှိနိုင်ပါ။
Delivery အချိန်: စတော့ရှယ်ယာမှာ
FOB စျေးနှုန်း: ။4*** 00 အမေရိကန်ဒေါ်လာ
ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် & ပက်ကေ့
အဆိုပါ roller ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအိုးချင်း fit မှအလယ်ဗဟိုအကွာအဝေးရဲ့အလိုအလျှောက်ချိန်ညှိနိုင်အောင် Self-align လုပ်ဖို့ဂဟေ Rotate ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Rotate အင်္ဂါရပ်ထိန်းချုပ်မှုလည်ပတ်ရန်လွယ်ကူအစွမ်းထက်, ယုံကြည်စိတ်ချရသောမော်တာ, ဖြစ်ပြီး, ruggedly တည်ငြိမ်မှုနှင့်ရှည်လျားသောဝန်ဆောင်မှုအသက်အဘို့အမိုးသည်းထန်စွာသံမဏိပန်းကန်၏ဆောက်လုပ်ထားကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Rotate အပေါငျးတို့သတင့်ကားလိပ်လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများစက်မှုလုပ်ငန်း, ပိုက်ဂဟေ roller ထဲမှာတိုးမြှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်ထိရောက်မှုဘို့ငါတို့ဂဟေခြယ်လှယ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူပေါင်းစည်းနိုင်ပါသည်။
Here below is the 20T Self Aligning Welding Rotators specification:
ဝန်စွမ်းရည် - Drive ကို 10 တန်ချိန်အများဆုံး
ဝန်စွမ်းရည် - Idler 10 တန်ချိန်အများဆုံး
ဝန်စွမ်းရည် - Set 20 တန်ချိန်အများဆုံး
လည်ပတ်စွမ်းရည် 20 တန်ချိန်အများဆုံး
ရေယာဉ်များအချင်း min ။ 500mm ~ Max.3500mm
လည်ပတ်မြန်နှုန်း 100 ကို ~ 1000 မီလီမီတာ / မိနစ် VFD
လည်ပတ်ပါဝါ ပန်ကာအအေးနှင့်အတူ 1.5kw
roller ဘီး PU (Polyurethane ဘီး)
ထိန်းချုပ်ရေးလမ်း ဝေးလံခေါင်ဖျားလက်ထိန်းချုပ်မှု + Foot နင်း
input ဗို့အား 110V ~ 575V လူပျို /3အဆင့် 50 / 60Hz
ကျွန်ုပ်တို့၏ Tank ခန္ဓာကိုယ်ဂဟေဆော်ခြင်းကြိတ်စက်ဂဟေဆော်ခြင်း Rotate အင်္ဂါရပ်:
1. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂဟေဆော်ခြင်း roller ရှိရေး: တစ်ခုမှာ drive ကိုအပိုင်းအစ roller & တယောက် idler အပိုင်းအစ roller ရောင်းချဘို့တအစုံအဖြစ်အတူတကွထုပ်ပိုးနေကြသည်။
2.Our Tank Rolls ထိန်းချုပ်ရေးလမ်းဖွင့်: Remote လက်ထိန်းချုပ်မှု, ရေဒီယိုလက်ထိန်းချုပ်မှု & Foot နင်းထိန်းချုပ်မှုအားလုံး avaialble ဖြစ်ကြသည်။
3.Our ပိုက်ဂဟေဆော်ခြင်း Rotate လမ်းညှိ: အချင်းနှင့်အတူအလိုအလြောကျ 12 ပိုက်အချင်း Adjust - 110 လက်မ
4.Our ကြိတ်စက်ပစ္စည်း: ရော်ဘာ / သံမဏိ / မှ PU (Nonferrous သတ္တု Polyurethane roller)
အခြေစိုက်စခန်းဘောင်သို့မဟုတ်စက်တပ်ခရီးသွားလာအခြေစိုက်စခန်းဘောင်ခရီးသွားလာ 5.Manual ရှည်ပိုက်ဂဟေဆော်ရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။
မူရင်းထုတ်လုပ်သူကနေ 6,100% သစ်ကို - WUXI အောင်မြင်မှုစက်ပစ္စည်းကိရိယာ, LTD ။ ။
Wuxi အောင်မြင်မှု Tank ဖွင့် Rolls အစိတ်အပိုင်းများအမှတ်တံဆိပ်ပြီးတော့အားသာချက်များသနား:
●အင်ဗာနှင့်ပင်မလျှပ်စစ်ဒြပ်စင် Danfoss / Yaskawa ဖြစ်ကြသည်။
●မော်တော်ဗြိတိန်အမှတ်တံဆိပ် Invertek ဖြစ်ပါတယ်။
● VFD rotary မြန်နှုန်းထိန်းချုပ်မှု, စစ်ဆင်ရေး၏ယုံကြည်စိတ်ချရတိုးတက်အောင်။
(အနည်းဆုံး2နှစ်) ကို အသုံးပြု. အချိန်ကြာမြင့်စွာသေချာနိုင်သည့်●သံမဏိသို့မဟုတ်မှ PU roller ။
●ဒီဂဟေ Rotate ပေးပို့မတိုင်မီစမ်းသပ်ခြင်းလက်ခံပါ။
●ဒီဂဟေ roller အထူးဒီဇိုင်းနှင့်ထုံးစံလက်ခံပါ။
1. ပုံမှန်အားဖြင့်ကျနော်တို့ကရော်ဘာပစ္စည်း roller ကိုအသုံးပြုဖို့ 60 သည် T မော်ဒယ်အထက်အောက်မှာကျနော်တို့သံမဏိပစ္စည်း roller ကိုအသုံးပြုပါ။
2. သင့်ရဲ့အလုပ်အပိုင်းအစပစ္စည်း Nonferrous သတ္တုလျှင်, ငါတို့သည်မှ PU roller အကြံပြုအပ်ပါသည်။
3. ကိုယ်ပိုင် align လုပ်ဖို့ပိုက်ဂဟေ roller / Bolt က adjsutment / ခဲဝက်အူညှိနှိုင်းမှု / Rotate တက်ကွက်တိအားလုံးရရှိနိုင်ပါသည်။
ဖြေအပြည့်အဝသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဆန့်ကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှသစ်သားအမှု၌ထုပ်ပိုး 1. ။
2. အများအားဖြင့်ကျနော်တို့ကြီးမားတဲ့စက်၎င်း၏ပိုပြီးအဆင်ပြေပြေနဲ့စျေးသက်သက်သာသာဖြစ်ပေါ်စေ, Seaways ယူပါ။
တံခါးကိုပေးပို့ဝန်ဆောင်မှု 3. တံခါးလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးက: 1. တစ်ခုမှာတစ်နှစ်တာအာမခံအချိန်နှင့်အတူအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများ, ပို့ဆောင်မှုမပြုမီကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်မှာအပြည့်အဝစမ်းသပ်။
2. သင် installation ကိုအပေါ်မဆိုမေးခွန်းများရှိပါကသင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာများ 24 နာရီအတွင်းကိုတုံ့ပြန်ရလိမ့်မယ်။
ဖိအားရေယာဉ်များဂဟေ roller / ပိုက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်း / လေပါဝါလုပ်ကြံလီဆယ်မှုများ / ဓာတု & လောင်စာဆီသိုလှောင်မှုအကြံပေးအဖွဲ့လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများ / လိပ် / Polishing / နေရာချထားခြင်းဂဟေလှည့်ပိုက် welding သည်မဆိုမိုးသည်းထန်စွာ cylindrical အကြံပေးအဖွဲ့လိပ် / ဘွိုင်လာစက်မှုလုပ်ငန်း / သိုလှောင်ကန်လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများ / ။
ယခင်: 10T ကိုယ်ပိုင် Align လုပ်ခြင်း Rotate
နောက်တစ်ခု: 40T ကိုယ်ပိုင် Align လုပ်ခြင်း Rotate
1. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုက်ဂဟေ roller စံဝေးလံခေါင်ဖျားလက်ထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာနှင့်ခြေလျင်နင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူအားလုံးဖြစ်ကြသည်။
2. ဂဟေ Rotate အဘို့အကြိုးမဲ့ / ရေဒီယိုလက်ထိန်းချုပ်မှုရရှိနိုင်ပါသော်လည်း, ပုံမှန်အားဖြင့်လေးလံသောတာဝန်နှင့်ရှည်လျားသောပိုက် / တင့်ကားသည်။
1. အမိန့်တဦးတည်း / နှစ်ခု Rotate welding စုံလျှင်, ကျွန်ုပ်တို့ LCL ရေကြောင်းများအတွက် installation ကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့သစ်သားအမှု၌ package ပါလိမ့်မယ်။
2. ဂဟေ roller တဦးတည်းတပြင်လုံးကိုကွန်တိန်နာအဘို့အလုံလောက်အောင်အရေအတွက်အမိန့်လျှင်, ငါတို့သည်တိုက်ရိုက်ကွန်တိန်နာသို့ထုပ်ပိုးပါလိမ့်မယ်။
1. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ (Wuxi အောင်မြင်မှု Machinery & ပစ္စည်း CO ။ , LTD မှ) ကမ္ဘာပေါ်မှာထက်ပိုမိုနိုင်ငံပေါင်း 30 မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂဟေ Rotate တင်ပို့ကြသည်။ ဥရောပ & အမေရိကားစတော့ရှယ်ယာရရှိနိုင်ပါသည်။
ဤတွင်အချို့သော Tank ဂဟေလိပ်ဓာတ်ပုံများကိုအလုပ်လုပ်နှင့်အတူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 2. မိမိတို့၏အလုပ် site မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များတုံ့ပြန်ချက်ကနေအားလုံးဖြစ်ကြသည်။
မက္ကစီကို 10T မိမိကိုယ်ကို Align လုပ်ခြင်းဂဟေ roller
ITALY 20T နှင့် 100T ဂဟေ Rotate
ရွှေ့ပြောင်းနယ်လှည့ wheel အမေရိကား 40T self align ပိုက်ဂဟေ roller
Self Align Welding Rotator
Self Aligned Tank Turning Roll
Self Alignign Welding Rotator
Self Aligning Welding Rotator
Self Aligning Welding Turning Roller
5T သမားရိုးကျဂဟေဆော်ခြင်း Rotate
10T သမားရိုးကျဂဟေ Rotate
ဟိုက်ဒရောလစ်နေရာဝင်ရိုး 1000kg 3
Delivery ကြီးထွားလာ Rotate